देव नारायणको रिहाईमा किन ढिलाई ? - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 National राजनीति देव नारायणको रिहाईमा किन ढिलाई ?
सप्तरी, १७ असोज । लामो दसैँ विदाका कारण सप्तरीको तिलाठीस्थित देव नारायण यादवको रिहाइ कार्य ढिलाई भइरहेको छ । प्रशासनले भदौ १६ गतेसम्म बिदा भन्दै सक्रियता नदेखाएपछि उनको रिहाइ कार्य ढिलाई भएको हो । यादवको रिहाइको लागि पहल गर्न सोमबारै गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगिरथ पाण्डेलाई निर्देशन दिएको थिए । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेसहितको टोली मंगलबारमात्रै छलफलमा जुटेका छन् ।
सप्तरी प्रशासनले मंगलबार बिहान देव नारायणको घरमा छलफल गरेका छन् । शनिबार साँझ छोरा अजय र आइतबार बिहान बुवा देव नारायण यादवलाई भारतको कुनौली थानाका पुलिसले पक्राउ गरी सुपौल जिल्लाको बिरपुर कारागारमा राखेको छ ।
भारतीय प्रहरीले दुबै जनामाथि भारत कुनौलीका युवती ज्योती कुमारी साहको अपहरण आरोप लगाउँदै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । यता युवतीले भने आफू अपहरणमा नपरेको र अजयसँग विवाह गरेको बताउँदै आएकी छन् ।